नजिकै बसेकी उनकी श्रीमतीलाई सही सक्नु भएन । उनी लोसेलोसे हुँदै आसन ग्रहण गरेको ठाउँबाट उठिन् अनि प्रमोदको कानमा खुसुक्क भनिन्, ‘बूढा ! कति जोडजोडले कराउनुभएको? बिस्तारै बोल्नु न।फेरि नयाँ घरमा चर्च खोलेको मान्छेले भाषण सुन्ला र चर्च अन्तै सार्ला नि !’...
काठमाडौं, जेठ ९ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जहाँ पुगेर भाषण गरे त्यहाँ महागठबन्धन भई एमाले पराजित भएको छ। एमालेका अध्यक्ष पुगेर पार्टी पंक्तिलाई उत्साही पार्ने र विपक्षीलाई पेल्न भाषण गर्दा सबै मिलेर ती ठाउँमा एमालेलाई पराजित गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन चारदेखि पाँचवटा स्थानमा पुगेर एमाले अध्यक्षले भाषण […]
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जहाँ पुगेर भाषण गरे त्यहाँ महागठबन्धन भई एमाले पराजित भएको छ। एमालेका अध्यक्ष पुगेर पार्टी पंक्तिलाई उत्साही पार्ने र विपक्षीलाई पेल्न भाषण गर्दा सबै मिलेर ती ठाउँमा एमालेलाई पराजित गरेका हुन्।स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन चारदेखि पाँचवटा स्थानमा पुगेर एमाले अध्यक्षले भाषण गरेका थिए। उनले भाषण गरेको केही जिल्लाका स्थानीय तहमा एमालेको प्रमुख जित्न सकेन। चैत १७ गते एमाले अध्यक्ष जुम्ला र कालिकोट पुगेका थिए । एमाले अध्यक्ष जुम्ला र कालिकोट पुग्
भारतमा सन् २०१९ पछिकै सबैभन्दा छाेटाे बजेट भाषण‚ आर्थिक चुनौती सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी
सार्वजनिक सभा, समारोहमा मञ्चमा गएर आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नु एउटा कला हो । प्रायः व्यक्ति साथीभाइसँग निर्धक्क बोल्न र गफ गर्न सके पनि मञ्चमा गएर भाषण दिन धकाउँछन् । त्यसको खास कारण भनेको भाषणकलासम्बन्धी ज्ञान र अभ्यासको कमीले हो । त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू भेटिन्छन्, जो भाषणका कारणसभासम्मेलनकै आकर्षण बन्छन् । तीमध्ये एक हुन्– पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनको मन्तव्यबाट सभामा उपस्थित जो कोही मन्त्रमुग्ध हुन्छन् । जुन कुनै कार्यक्रममा भाषण गरे पनि भाइरल नै हुन्छन् । सभा सम्मेल
सत्ताको कुर्सीबाट ओर्लिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालका दुई अभिव्यक्ति फेसबूकमा सुनें । पढें पनि । छक्क परेंं म । यो सोच साँच्चिकै पुष्पकमल दाहालको हो ? पुष्पकमल दाहाल रोएको भनी, नकारात्मक चित्रण गरिएको त्यो भाषण उहाँको जीवनको सबैभन्दा राम्रो भाषण हो । ‘जनयुद्ध’को चर्चा गर्दा पटक–पटक उहाँ भक्कानिनु भयो । जसले बन्दुक उठाएको हुन्छ, त्यसलाई बन्दुकले दिने यातनाको पीडा बढी थाहा हुन्छ । आफ्ना छापामारहरूलाई शुरूदेखि नै श्रममा लगाउन पाएको भए आज हाम्रो पार्टी एक्लैले सरकार चलाउ...
रुघा खोकीका कारण सम्बोधन भाषण टुंग्याउन सकेनन् ओलीले
कम्युनिष्ट शीर्ष नेताले एउटै मञ्चबाट भाषण गर्ने
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा आलीबाहेक अन्य सबै शीर्ष नेताहरुले आज एउटै मञ्चबाट भाषण गर्ने भएका छन्। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सबै नेताले भाषण गर्ने भएका हुन्। माधव नेपाल,पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य किरणलगायतका नेताहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलन र आगामी बाटोका विषयमा विचार राख्ने स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
ओलीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्नुहोला: माधव नेपाल
‘उहाँको भाषण रेकर्ड गरेर राख्नुहोला। राम्राराम्रा कुरा बोल्नुभएको होला। म पनि खोजिरहेको छु। भाषण ध्यान दिनुपर्ने रहेछ,’ नेता नेपालले भने, ‘बौलाह कुकुरले टोकेको छ भन्ने कुरामा ध्यान जाओस्।’